अनुहारमा प्राकृतिक चमक ल्याउन यसो गर्नुहोस् « Kathmandu Pati
अनुहारमा प्राकृतिक चमक ल्याउन यसो गर्नुहोस्
प्रकाशित मिति : २०७६, १ फाल्गुन बिहीबार ११:४१
काठमाडौं –अनुहार चम्किलो बनाउँन मेकअप गर्ने गरिन्छ तर मेकअप गर्दैमा अनुहारमा चकम आउँदैन । पछिल्लो समय अनुहारमा भएको दाग, चाउरीपनालाई ढाकछोप गर्न, अनुहारलाई आकर्षक देखाउन मेकअप गरिन्छ ।
तर अनुहारलाई बिना मेकअप कसरी चम्किलो र मुलायम ? यसका लागि भने हामीले प्राकृतिक उपाय अपनाउँनुपर्छ । अनुहारमा चमक ल्याउनका लागि सम्पूर्ण शरीर नै तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । शारीरिक रुपमा सक्रिय, तन्दुरुस्त एवं स्वस्थ्य व्यक्तिको अनुहारमा प्राकृतिक चमक हुन्छ । त्यसैले अनुहारलाई चमकदार बनाउँन विभिन्न किसिमका क्रिम प्रयोग गर्नुभन्दा शारीरिक स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ ।
यसका लागि हामीले सुत्ने, उठ्ने, खाने, शौच गर्ने नियमित तालिका निर्माण गर्नुपर्छ । पोषिलो आहार खाने, सकारात्मक सोंच राख्ने, ताजा फलफूल, सागसब्जी, जुस आदिको सेवन गर्ने, अनुहारको सरसफाईमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । यसैगरी व्यायाम, योग एवं ध्यान जस्ता विधीले पनि अनुहारको सौन्दर्यमा प्रभाव पार्छ ।
हामीले हाम्रो अनुहार दिनमा दुई पटकभन्दा धेरै धुनु राम्रो हुँदैन । किनभने त्यसरी पटक–पटक अनुहार सफा गर्दा छाला रुखो र संवेदनसिल हुन्छ ।
मुटु रोग र उच्च रक्तचापका बिरामीलाई यस्ता छन् दहिका फाईदाहरु
काठमाडौं – दहि स्वादका लागी मात्र नभएर स्वास्थ्यका लागी फाइदाजनक
गर्मीयाममा लाग्न सक्छ यस्ता रोग, स्वस्थ रहन के गर्ने ?
काठमाडौं – गर्मीयाम र वर्षायाम सुरु भएसँगै मानव शरीरमा विभिन्न
जर्मनीमा कोरोनाभाइरसको मृत्युदर यसकारण रहेछ कम
एजेन्सी- विश्व कोरोनाभाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको छ र केही मुलुकहरु
कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना
काठमाडौं – सरकारले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको